Steel onu, waya ntupu ngere Manufacturer - Tian Yilong
Zuru ezu Product Description Ihe: Hot-tinye kpaliri Waya Ngwa: itienna & Enclosures :dị: kpaliri Tupu akpa ákwà (GBW) Oghere Size / Waya Dia: 1 "/ 0.835mm Njirimara: echekwa, Agafeghị oke Ndụ Ahịa Mere: Nabata High Light: oké ọrụ ọkụkọ waya, nwa ann ...
Zuru ezu Product Description Ihe: Hot-tinye kpaliri Waya Ngwa: itienna na Enclousers Aperture: 1, Waya Dia: 18gauge Obosara: 2ft, 3ft, 4ft Ogologo: 100ft Omimi: 19cm High Light: nwa annealed tie waya, nwa annealed nkịtị nkịtị waya Chicken Coops. Chicken waya Net ...
Zuru ezu Product Description Ihe: Hot itinye kpaliri Waya, igwe anaghị agba nchara Waya Size: 1inch, 25mm Njirimara: Ọkara Ndụ ndimmadu, Great Reinforcement Factory Mere: Ee Customer Made: Nabata Ngwa :: sterlọ, Masonry Ma plasta High Light: nwa annealed tie waya, bl ...
Nkọwa nkọwa doglọ nkịta na-arụ ọrụ dị nkenke bụ ụlọ a na-azụkọta anụ ụlọ. Enwere ike idobe ya. Ọ kachasị maka nnukwu nkịta, ewu na ọkụkọ. Ọ na-eku ume, na-adigide, na-echekwa, na panel na-abịa tupu-chịkọta. Nkọwapụta Product Aha Nga kpọkọtara welded Dog kennel Product Agba Blac ...
Ejupụtara Modular Chain Link Dog Kennel ka nke Metal Pipe na Chain Link Steel. Ọ bụ ụdị nke ulo oru ulo oru ugbo. Dị oke mma maka anụmanụ buru ibu na-anọ n'èzí, ọ na-eku ume, na-adigide ma na-echekwa. Anyanwụ anụ ụlọ, ndị na-ebu ya na ụlọ maka egwuregwu n'èzí anụmanụ. Nkọwapụta Ngwaahịa Aha Mo ...
Nkọwa nkọwa doglọ nkịta na-arụ ọrụ dị nkenke bụ ụlọ a na-azụkọta anụ ụlọ. Enwere ike idobe ya. Ọ kachasị maka nnukwu nkịta, ewu na ọkụkọ. Ọ na-eku ume, na-adigide, na-echekwa, na panel na-abịa tupu-chịkọta. Muliple configures chịkọtara, Nkịta onu melite na-erughị 30 nkeji. Adịchaghị ...
Zuru ezu Product Description Ihe: Electric kpaliri Waya Agba: White, Green Waya Dia: 4.5mm Oghere Size: 200mm X 55mm Usoro: Professional ịgbado ọkụ Ngwa: Mwepu ngere N'ihi Ogige, Residential Post Model: Square Post, ero udi, Quadrate ngere Post Feature: Ngwa di nma ...
Zuru ezu Product Description Ihe: Electro kpaliri Waya Agba: White, Green, Yellow Waya Dia: 4.0mm Oghere Size: 200mm X 65mm Usoro: Professional ịgbado ọkụ Ngwa: Mwepu ngere N'ihi Ogige, Okporo Postzọ Post Model: Square Post, Quadrate ngere Post Njirimara: Nice Ọdịdị, Ike ...
Anyị nwere ìgwè ndị ọrụ aka siri ike na ụlọ ọrụ ahụ, ọtụtụ iri afọ nke ahụmịhe ọkachamara, ọkwa dị mma magburu onwe ya, na-ekepụta akụrụngwa arụmọrụ dị elu.
The ụlọ ọrụ na-eji elu imewe usoro na ojiji nke elu ISO9001 2000 mba quality management usoro management.
GN B SHRO IJI Jiri GALVANIZED MGBE Ọ B W ỌB WR W ELLỌ AKA?
Na-achọ ịgbanye waya izizi kpara akpa? You maara na ị nwere nhọrọ? E nwere ụdị abụọ nke galvanized welded waya fencing ihe: GBW (kpaliri tupu ịkpa ákwà / ịgbado ọkụ) na GAW (kpaliri Mgbe ịkpa ákwà / ịgbado ọkụ). Anya ha pụtara yiri nnọọ. Ma na-elerukwu anya, ị ca ...
REEzọ atọ iji mee ka ọkụkọ dị na WIRE / HEXAGONAL WIRE NETTING
1) Agbakwunye nwee ume waya (otu nwee ume waya kwa 0.5m) Na-emekarị tinye otu nwee ume waya na 1m obosara netting. Tinye wiwi abụọ wusiri ike na 1.5m n'obosara ntaneti Tinye uzo ato ato na 2.0m n'obosara netting IHE: Ọnụ ọgụgụ nke waya nkwado nwere ike ịgbakwunye na arịrịọ ndị ahịa. 2) ihu abụọ Mee e ...
A na-ezigara ndị ọrụ nne nna nna m ka ha fụchie nke ọma. Igwe a na-ahụkarị vinyl na ụdị mkpuchi waya niile, gụnyere ntupu eji eji ọnyà lobster. N'ebe a akwa mkpuchi dị elu, nke gbara agba ma na-agbanwe agbanwe nke UV mesoro Black PVC na-ejikọta nke ọma na ntupu waya. Ihe mkpuchi ahụ bụ s ...
Anyị, a n'ichepụta na trading ngwakọta, a ezinụlọ ekesịpde azụmahịa na-aga n'ihu ọrụ kemgbe 1990. Anyị na-emepụta na mbupụ widest ngwaahịa mix nke waya, waya netting na ngere na yiri ihe. Anyị bụ ndị gị tụkwasịrị obi isi iyi maka gị niile waya ntupu chọrọ.We-agba mbọ iji na-enye àgwà ngwaahịa na-anọchi anya magburu onwe uru na ezi ihe nlereanya etoju nke ahịa ọrụ na niile etoju na anyị azụmahịa. Ọnọdụ anyị nke akụrụngwa, ahụmịhe dị ukwuu, njikwa njikwa sayensị na ndị otu raara onwe ha nye na-eme ka azịza ntanetị zuru oke maka ngwa ụwa.
Anyị na-agba mbọ iji nye mma.
Anyị bụ isi iyi ntụkwasị obi gị.
Nlereanya nke ndị ahịa.